Tsy sarona Xiaomi Mi Note 10: endrika sy endrika misy | Androidsis
Omaly, hitantsika ny momba ny fisian'ny telefaona Xiaomi vaovao. Ary io, ilay orinasa miorina ao Beijing dia nampiseho afisy iray izay manazava tsara ny fisian'i El Xiaomi Mi Fanamarihana 10. Eny, tena tsiambaratelo misokatra iray ny Mi CC9 Pro, saingy mila miandry ianao vao manamafy azy. Ankehitriny dia namakivaky ny TENNA izy io, izay ahitanay antsipirihany ny endriny, ankoatry ny ampahany amin'ireo toetra ara-teknika.
Ary io, ny maso ivoho fanamarinana sinoa dia namela ny tsiambaratelo rehetra momba ny Xiaomi Mi Note 10 naseho, mampiseho ny endriny farany, ankoatry ny ampahany lehibe amin'ny toetra ara-teknika. Efa tsinjovinay fa hahagaga anao ny antsipiriany sasany.
Ity no El Xiaomi Mi Note 10: efijery miolaka ary maro hafa
Araka ny hitanao amin'ny sary izay mitarika ireo andalana ireo, ny Xiaomi Mi Note 10 dia manana antsipiriany mahaliana eo anoloana: tontonana roa miolaka. Ny telefaona dia antenaina hanana Efijery OLED 6.47-inch ary ny vahaolana Full HD +, noho izany dia ho avo ny fiainana multimedia. Ho an'ity, ampio ny faritry ny karazan-drano mitete mba hamotipotehina araka izay tratra ny estetika amin'ny tontonana, ary manana fitaovana mety izahay hijerena sarimihetsika sy andian-tantara. Tsy ampy ho anao? Fantaro fa hanana tahan'ny famelomana 90 Hz ihany koa izy io.
Miaraka amin'ny refin'ny 157.8 × 74.2 × 9.67 mm, voamarina ihany koa fa ny Mi Note 10 vaovao an'i Xiaomi dia hanana fivoahana 3.5 mm, antsipiriany izay ankasitrahantsika. Amin'ny haavon'ny fitaovana, ankoatra ny fametrahana ny efijery OLED mammoth izay efa noresahintsika teo aloha, dia lazao fa ho avy amin'ny kinova 6 GB, 8GB ary hatramin'ny 12 GB RAM izy, miaraka amin'ny 64 GB, 128 GB ary 256 GB fitehirizana anatiny. Powered by processeur rehetra Qualcomm Snapdragon 730G, mba hahafahantsika mankafy izay lalao na fampiharana tsy misy olana.
Ary 0jo, fa ny Bateria Xiaomi Mi Note 10 dia hanana 5.170 mAh, izay manazava fa ny fizakan-tenan'ity fitaovana ity dia ho singa iray mampiavaka azy faran'izay mahatalanjona. Ankehitriny, mila miandry fotsiny isika amin'ny 5 Novambra, ny daty hanehoana azy, hahitantsika izay tsy ampoizin'ilay mpanamboatra sinoa antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Note 10 dia miloka ambony: bateria tsy mety ritra, efijery misy fahagagana sy maro hafa